Igodo nke ihe mmebe nke idobe peeji | Martech Zone
The folks na Uplers na-emepụta nke a mmekọrịta infographic, A Deep amaba Jiri nke Visuals na ọdịda Pages, Nke mkpuchite otú ọdịda ibe ha na oké egwu visual ihe na mmetụta akakabarede udu.
Ihe na-eme nke ọdịda Pages
Ezubere iche Keywords maka Organic Search - Site na-eke a ọdịda page kachasị search engines, i nwere ike ịrịọ ka algọridim na-esi nri okporo ụzọ gị ọdịda page. Site na ichikota, ị nwere ike ịfuo na nchọta ọchụchọ.
Na-eduga na Ntughari - Ibe akwukwo ndi ozo bu uzo di nma iji ghara ijide ndu, ma site na uzo di irè, ha nwere ike ime ka ahia na ROI karie.
Product Launch ma ọ bụ Promotion - gwa ndị na-ege gị ntị okwu ma na-eduzi ha gaa na ngwaahịa ma ọ bụ onyinye bụ ezigbo ụgbọ mmiri na peeji nke ọdịda.
Mgbasa Mgbasa Ozi - Ibe ọdịda dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-agba mgbasa ozi Ad mana ọ ga-adaba n'ụzọ zuru oke, dịka nkpuchi iku ume maka onye na-egwu mmiri.
Njem Ndị ahịa Na-eso ụzọ - ọdịda peeji nke nwere ike inyere soro arụmọrụ nke gị ahịa mgbalị. Nyochaa nchịkọta ga-agwa gị ọtụtụ ihe gbasara amaghị.
Otu ụzọ iche banyere ọdịda peeji bụ na ọ bụ a ebe peeji nke ịchọrọ ka atụmanya ma ọ bụ ndị ọbịa ga-abanye ma ọ gaghị agafe. Dị ka a na-aga, ihe ndị na-emepụta na marketers na-kacha mma itinye ọtụtụ ndị oge ha na-aghọta esenowo na otú kacha mma na-emetụta àgwà ha mgbe ha na-abanye a ọdịda page.
Key Visual Ihe na ọdịda Pages
Photos - 80% of ekiri na-eme ihe enyịn ọdịnaya nke oyiri ọ bụrụ na ọ bụ site oyiyi. Ọ bụrụ na ị na-eji a Eserese ma ọ bụ ezigbo oyiyi nke a ihu, i nwere ike ịgbanwe ihe na visual cues site na-agbanwe anya ụlọ nke nlereanya.
GIFs - 80% of ndị yiri echeta ịhụ a video, ebe naanị 20% na-echeta ihe ha na-agụ na a na peeji nke. Obere ihe ngosi dị mkpirikpi zuru oke n'etiti. Site na iji akụ na eserese na akara ngosi maka CTA iji gosipụta ngwaahịa na ogo ogo 360, GIF bụ ndị na-echebe ndụ peeji nke gị.
Videos - Iji vidiyo na ọdịda peeji nke egosiputa ịbawanye ntụgharị site na 86%. Ma, nke a nwere ike nweta naanị site na iji mkpa video nke na-egosipụta na ika na-egosi chọrọ ozi.
Illustrations - 95% of B2B azụ ahịa kwuru na ha chọrọ mkpumkpu na ukwuu visual ọdịnaya. Ihe osise nwere uzo esi emebi okwu di nkpa n’ime ihe nlere anya di mfe nke g’akowa usoro ma obu okwu a.
Ihe osise - ọdịda peeji nke nwere ike ịbụ a akwa ebe na-kọwaa mgbagwoju anya na ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ data site na mfe onyeōzi onodi.
Tụkwasị na nke a, Nchikota typography na na agba na-arụ a nnukwu ọrụ. Akara ókwú, aga, isiokwu nta, obi ike ederede ji imesi okwu ike ederede nwere ike niile enyemaka gị esenowo Doppler na-elekwasị anya na ozi na ị chọrọ dọọrọ uche ha gaa. Agba nwere ike mmetụta nghọta na ụda nke ọdịnaya ị chọrọ ikwu.
Ma, n'ezie, usoro dị mfe iji weghara data na-ebelata nkụda mmụọ nke onye ọrụ chọrọ ịbanye na gị. Mpempe akwụkwọ dị iche iche, ọtụtụ ụdị nwere usoro nkwado dị mgbagwoju anya nwere ike belata ọnụego ntụgharị nke ihu ala gị. Site na-eweta a dị mfe, ntakiri ụdị - ma ọ bụ ọbụna na-enwe a mkpụrụ ihe ịrịba ama-on usoro na-akpaghị aka na-agabiga ndị dị mkpa data ... ị nwere ike dịkwuo aka na akakabarede udu.
Lelee Ihe omuma ihe omuma
Tags: datagrafụoyiyiimebe peejimbido peeji nkendị uplersvideosvisual imewe